တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Army General Sergey K.SHOIGU အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဇန်နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Army General Sergey K.SHOIGU အား ဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေပြည်တော်၊ ဇန်န၀ါရီ – ၂၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Army General Sergey K.SHOIGU အား ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိဇေယျာသီရိဗိမာန်ရှေ့၌ ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆိုသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့သည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏အလေးပြုခြင်းကိုခံယူကြပြီး ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ကို လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ ယင်းနောက် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့သည် အခမ်းအနား တက်ရောက်လာကြသော နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်အရာရှိကြီးများကို အပြန်အလှန်မိတ်ဆက်ပေးကြသည်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မြင့်နွယ်တို့ တက်ရောက်ကြပြီး ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Dr. Nikolay A.LISTOPADOV၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lieutenant General Alexander V.FOMIN ၊ ရုရှားတပ်မတော်မှအရာရှိကြီးများနှင့် ရုရှားနိုင်ငံစစ်သံမှူးတို့တက်ရောက်ကြသည်။
ထို့နောက် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသည် ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌တွေ့ဆုံ၍အပြန်အလှန်နှုတ်ခွန်းဆက် စကားများပြောကြားခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် ရုရှား-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ရုရှားနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံသည် မိတ်ဆွေနိုင်ငံများဖြစ်ပြီး မိမိတို့နိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရရှိချိန်မှစ၍ နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခဲ့ကြောင်း၊ အလှမ်းကွာဝေးသော်လည်းထူးခြားသည့် ဆက်ဆံရေးများရှိကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နယ်ပယ်များစွာကျယ်ပြန့်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရုရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများတွင် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာ၌ မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ဧည့်သည်တော်ဝန်ကြီးက နှစ်နိုင်ငံအခက်အခဲများကိုအပြန်အလှန် ကူညီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် အောင်မြင်မှုများရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့တပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြားချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တပ်မတော်(ရေ)နှစ်ရပ်အကြား စစ်သင်္ဘောများအပြန်အလှန် လည်ပတ်ရေးကိစ္စရပ်များအား တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွား ခဲ့သည့်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများတွင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနှင့်တပ်မတော်မှ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများအပေါ် ထောက်ခံပေးမှုအတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ မျက်မှောက်ခေတ်ကာလ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများအား ဆိုရှယ်မီဒီယာများတွင် နေ့စဉ်တွေ့မြင်နေရပြီး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏လုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုများကို နေ့စဉ်ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်သမားများသည် အများပြည်သူများသွားလာလျက်ရှိသည့် Public Area များတွင် အကြမ်းဖက်မှုများအမြဲတစေ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အစွန်းရောက်သမားများသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာများအားအသုံးပြု၍၀ါဒဖြန့်စည်းရုံး လူသစ်စုဆောင်းလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ARSA အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ၏တိုက်ခိုက်မှုများတွင် တပ်မတော်သားများ၊ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြောင်း၊ အဆိုပါအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ နယ်မြေတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် ပြည်သူလူထု၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များအားထိခိုက်စေကြောင်း၊ ARSA အစွန်းရောက် ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ထိခိုက်စေရန်ဦးတည်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်သမားများသည် နိုင်ငံတကာတွင် ဆိုရှယ်မီဒီယာများအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများအား မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်စေရန်အတွက် ၀ါဒဖြန့်မှုများဆောင်ရွက်၍ မိမိတို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဘင်္ဂါလီများကိုသာ နှိပ်စက်သည့်ပုံစံဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး တစ်ချို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းများက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စွပ်စွဲပြီး ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုများ ဆောင်ရွက်လာကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် အစိုးရနှင့်တပ်မတော်မှဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အဆွေတော်တို့၏ အမြဲထောက်ခံအားပေးပြီး အတူယှဉ်တွဲနေခြင်းသည် မိမိတို့ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်အားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးပြောကြားသည်။
ဧည့်သည်တော်ဝန်ကြီးက ရခိုင်ဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများသည် နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုများရှိသည်ဟုယူဆပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၊ တပ်မတော်နှင့်နိုင်ငံသားများအားလုံး နည်းလမ်းရှာဖွေဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အခက်အခဲများရှိပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် အခြေအနေမှန်များအား နိုင်ငံတကာမှသိရှိအောင် မိမိတို့နိုင်ငံမီဒီယာမှဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး တို့သည် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား စစ်ဘက်နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ တပ်မတော်(ရေ)နှစ်ရပ်အကြား စစ်သင်္ဘောများ အပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေး၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရေးခရီးများအပြန်အလှန်လည်ပတ်ရေးနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးကြသည်။
ဆက်လက်ပြီး ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံနှင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်၊ မြန်မာ့တပ်မတော်တို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနားအား ကျင်းပပြုလုပ်ရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Army General Sergey K.SHOIGU နှင့်ရုရှားတပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Army General Sergey K.SHOIGU နှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား ဂုဏ်ပြုနေ့လယ်စာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။ နေ့လယ်စာသုံးဆောင် နေစဉ်အတွင်း ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးကွပ်ကဲမှုအောက် မြ၀တီတေးဂီတအဖွဲ့က နှစ်နိုင်ငံတေးသီချင်းများ၊ အကပဒေသာများဖြင့် သီဆိုတီးမှုတ်ဖျော်ဖြေကြသည်။
နေ့လယ်စာသုံးဆောင်အပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက် ကြသည်။ ထို့နောက် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသည် မြ၀တီ၊ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းကို စိတ်ဝင်တစားဖြင့် ကိုယ်တိုင်တီးခတ်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့သည်။
နပွေညျတျော၊ ဇနျနဝါရီ – ၂၀
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီး Army General Sergey K.SHOIGU အား ယနနေ့လေ့ယျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိဇယြောသီရိဗိမာနျရှေ့၌ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ဖွငျ့ကွိုဆိုသညျ။
ဦးစှာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးတို့သညျ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့၏အလေးပွုခွငျးကိုခံယူကွပွီး ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ကို လိုကျလံကွညျ့ရှုစဈဆေးသညျ။ ယငျးနောကျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးနှငျ့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျတို့သညျ အခမျးအနား တကျရောကျလာကွသော နှဈနိုငျငံတပျမတျောအရာရှိကွီးမြားကို အပွနျအလှနျမိတျဆကျပေးကွသညျ။
အဆိုပါဂုဏျပွုကွိုဆိုပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီး တငျအောငျစနျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျောနှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ဗိုလျခြုပျမွငျ့နှယျတို့ တကျရောကျကွပွီး ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံကာကှယျရေးဝနျကွီးနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Dr. Nikolay A.LISTOPADOV၊ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ဒုတိယကာကှယျရေးဝနျကွီး Lieutenant General Alexander V.FOMIN ၊ ရုရှားတပျမတျောမှအရာရှိကွီးမြားနှငျ့ ရုရှားနိုငျငံစဈသံမှူးတို့တကျရောကျကွသညျ။
ထို့နောကျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံကာကှယျရေးဝနျကွီးသညျ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့သညျတျောမှတျတမျးစာအုပျတှငျ မှတျတမျးတငျလကျမှတျရေးထိုးပွီး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌တှဆေုံ့၍အပွနျအလှနျနှုတျခှနျးဆကျ စကားမြားပွောကွားခဲ့ကွသညျ။
ထို့နောကျ ရုရှား-မွနျမာ နှဈနိုငျငံအကြိုးတူဆှေးနှေးပှဲပွုလုပျခဲ့ရာ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ရုရှားနိုငျငံနှဈနိုငျငံသညျ မိတျဆှနေိုငျငံမြားဖွဈပွီး မိမိတို့နိုငျငံ လှတျလပျရေးရရှိခြိနျမှစ၍ နှဈနိုငျငံခေါငျးဆောငျမြားဆကျဆံရေးကောငျးမှနျခဲ့ကွောငျး၊ အလှမျးကှာဝေးသျောလညျးထူးခွားသညျ့ ဆကျဆံရေးမြားရှိကွောငျး၊ နှဈနိုငျငံဆကျဆံရေး ပိုမိုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျရနျလိုအပျပါကွောငျး၊ ထိုသို့ဆောငျရှကျခွငျးဖွငျ့ နှဈနိုငျငံပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု နယျပယျမြားစှာကယျြပွနျ့လာမညျဖွဈကွောငျး၊ ရုရှားနိုငျငံအနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ပွုပွငျပွောငျးလဲမှုမြားတှငျ နိုငျငံတကာမကျြနှာစာ၌ မွနျမာနိုငျငံဘကျမှ ရပျတညျဆောငျရှကျပေးခဲ့မှုမြားအတှကျ ကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး ပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ ဧညျ့သညျတျောဝနျကွီးက နှဈနိုငျငံအခကျအခဲမြားကိုအပွနျအလှနျ ကူညီပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားဖွငျ့ အောငျမွငျမှုမြားရရှိမညျဖွဈကွောငျး၊ စဈဘကျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားပိုမိုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ မိမိတို့တပျမတျော နှဈရပျအကွားခဈြကွညျရငျးနှီးမှုကို ပိုမိုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျးနှငျ့ တပျမတျော(ရေ)နှဈရပျအကွား စဈသင်ျဘောမြားအပွနျအလှနျ လညျပတျရေးကိစ်စရပျမြားအား တိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျးပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရဦေးစီးခြုပျက ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးဖွဈပှား ခဲ့သညျ့အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြားတှငျ မွနျမာနိုငျငံအစိုးရနှငျ့တပျမတျောမှ ဖွရှေငျးဆောငျရှကျခဲ့မှုမြားအပျေါ ထောကျခံပေးမှုအတှကျလညျးကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျး၊ မကျြမှောကျခတျေကာလ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြားအား ဆိုရှယျမီဒီယာမြားတှငျ နစေ့ဉျတှမွေ့ငျနရေပွီး ကမ်ဘာ့နိုငျငံမြား၏လုံခွုံရေးနှငျ့ တညျငွိမျအေးခမျြးမှုမြားကို နစေ့ဉျခွိမျးခွောကျလကျြရှိကွောငျး၊ အကွမျးဖကျသမားမြားသညျ အမြားပွညျသူမြားသှားလာလကျြရှိသညျ့ Public Area မြားတှငျ အကွမျးဖကျမှုမြားအမွဲတစေ ဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး အစှနျးရောကျသမားမြားသညျ ဆိုရှယျမီဒီယာမြားအားအသုံးပွု၍ဝါဒဖွနျ့စညျးရုံး လူသဈစုဆောငျးလကျြရှိသညျကိုတှရှေိ့ရကွောငျး၊ အကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရေးအတှကျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသှားမညျဖွဈကွောငျး၊ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးဖွဈပှားခဲ့သညျ့ ARSA အစှနျးရောကျ ဘင်ျဂါလီအကွမျးဖကျသမားမြား၏တိုကျခိုကျမှုမြားတှငျ တပျမတျောသားမြား၊ လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ ဌာနဆိုငျရာဝနျထမျးမြားနှငျ့ ဒသေခံပွညျသူမြား ရကျရကျစကျစကျသတျဖွတျခံခဲ့ရကွောငျး၊ အဆိုပါအကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြားသညျ နိုငျငံတျောလုံခွုံရေး၊ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေး၊ နယျမွတေညျတံ့ခိုငျမွဲရေးနှငျ့ ပွညျသူလူထု၏ အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျမြားအားထိခိုကျစကွေောငျး၊ ARSA အစှနျးရောကျ ဘင်ျဂါလီအကွမျးဖကျသမားမြားသညျ မွနျမာနိုငျငံ၏ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေးလုပျငနျးစဉျမြား ထိခိုကျစရေနျဦးတညျဆောငျရှကျလကျြရှိသညျကိုတှရှေိ့ရကွောငျး၊ အကွမျးဖကျသမားမြားသညျ နိုငျငံတကာတှငျ ဆိုရှယျမီဒီယာမြားအားအသုံးပွု၍ ၎င်းငျးတို့ကြူးလှနျခဲ့သညျ့ အကွမျးဖကျမှုမြားအား မှေးမှိနျပြောကျကှယျစရေနျအတှကျ ၀ါဒဖွနျ့မှုမြားဆောငျရှကျ၍ မိမိတို့လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျမြားက ဘင်ျဂါလီမြားကိုသာ နှိပျစကျသညျ့ပုံစံဖွငျ့ဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး တဈခြို့နိုငျငံတကာအသိုငျးအဝိုငျးမြားက မွနျမာနိုငျငံအပျေါစှပျစှဲပွီး ပိတျဆို့ကနျ့သတျမှုမြား ဆောငျရှကျလာကွောငျး၊ ယခုအခြိနျတှငျ ရခိုငျပွညျနယျတညျငွိမျအေးခမျြးရေးအတှကျ အစိုးရနှငျ့တပျမတျောမှဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး အဆှတေျောတို့၏ အမွဲထောကျခံအားပေးပွီး အတူယှဉျတှဲနခွေငျးသညျ မိမိတို့ရှဆေ့ကျဆောငျရှကျရနျအားတဈခုဖွဈ ကွောငျးဆှေးနှေးပွောကွားသညျ။
ဧညျ့သညျတျောဝနျကွီးက ရခိုငျဒသေအတှငျးဖွဈပှားခဲ့သညျ့ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြားသညျ နိုငျငံရေးနှငျ့ပတျသကျဆကျနှယျမှုမြားရှိသညျဟုယူဆပါကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံအစိုးရ၊ တပျမတျောနှငျ့နိုငျငံသားမြားအားလုံး နညျးလမျးရှာဖှဆေောငျရှကျရမညျဖွဈပွီး အခကျအခဲမြားရှိပါကွောငျး၊ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးဖွဈပှားလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမှေနျမြားအား နိုငျငံတကာမှသိရှိအောငျ မိမိတို့နိုငျငံမီဒီယာမှဆောငျရှကျပေးသှားမညျဖွဈကွောငျးပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီး တို့သညျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား စဈဘကျနညျးပညာပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ လကေ့ငျြ့ရေးဆိုငျရာပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး၊ တပျမတျော(ရေ)နှဈရပျအကွား စဈသင်ျဘောမြား အပွနျအလှနျလညျပတျရေး၊ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရေးခရီးမြားအပွနျအလှနျလညျပတျရေးနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးကွသညျ။
ဆကျလကျပွီး ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံနှငျ့ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော၊ မွနျမာ့တပျမတျောတို့အကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး သဘောတူစာခြုပျလကျမှတျရေးထိုးခွငျး အခမျးအနားအား ကငျြးပပွုလုပျရာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျနှငျ့တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီး Army General Sergey K.SHOIGU နှငျ့ရုရှားတပျမတျောမှ အရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွသညျ။
ထို့နောကျ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန ဒုတိယဝနျကွီး ဗိုလျခြုပျမွငျ့နှယျနှငျ့ ရုရှား ဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ဒုတိယကာကှယျရေးဝနျကွီး Lieutenant General Alexander V. FOMIN တို့က ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ တပျမတျောတို့အကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာ သဘောတူစာခြုပျအား လကျမှတျရေးထိုးခဲ့ကွပွီး အပွနျအလှနျလဲလှယျခဲ့ကွသညျ။
ယငျးနောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ က ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီး Army General Sergey K.SHOIGU နှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားအား ဂုဏျပွုနလေ့ယျစာဖွငျ့တညျခငျးဧညျ့ခံသညျ။ နလေ့ယျစာသုံးဆောငျ နစေဉျအတှငျး ပွညျသူ့ဆကျဆံရေးနှငျ့စိတျဓာတျစဈဆငျရေးညှနျကွားရေးမှူးရုံးကှပျကဲမှုအောကျ မွဝတီတေးဂီတအဖှဲ့က နှဈနိုငျငံတေးသီခငျြးမြား၊ အကပဒသောမြားဖွငျ့ သီဆိုတီးမှုတျဖြျောဖွကွေသညျ။
နလေ့ယျစာသုံးဆောငျအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျကွပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျ ကွသညျ။ ထို့နောကျ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီးသညျ မွဝတီ၊ မွနျမာ့ရိုးရာယဉျကြေးမှု မွနျမာ့ဆိုငျးဝိုငျးကို စိတျဝငျတစားဖွငျ့ ကိုယျတိုငျတီးခတျလလေ့ာကွညျ့ရှုခဲ့သညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Army General Sergey K. SHOIGU အား ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့် ကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအားလက်ခံတွေ့ဆုံ